ဘန်ကောက်တွင် ကွန်ဒိုဝယ်ရန် သိသင့်သောအကြောင်းအရာများ | iMyanmarHouse.com
ဘန်ကောက်တွင် ကွန်ဒိုဝယ်ရန် သိသင့်သောအကြောင်းအရာများ
iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း) မှ​ရောင်းချ​ပေး​နေ​သော ထိုင်းနိုင်​ငံ ဘန်​​ကောက်​မြို့့မှ ကွန်​ဒိုများ
Regent Sukumvit သညျ 200 Sukumvit 97/1 Alley, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong တှငျ Green Power မှ တာဝနျယူတညျဆောကျပါသညျ။ (၈) လှာအမွငျ့ရှိပွီး အဆောကျအဦး (၆) လုံး နှငျ့ အခနျးပေါငျး (၁၂၄၅) ခနျး ပါဝငျသညျ။ Room Type Studio 1 Bedroom Facilities Elevators parking 24 hours security CCTV Swimming Pool Gym Garden BBQ Wi-fi စသညျဖွငျ့ Condo Facilities...
A Space Me Condo
A Space Me 77 ကှနျဒိုသညျ ဘနျကောကျမွို့ Sukhumvit လမျးမပျေါရှိ ဘိုးဘှားပိုငျမွပေျေါတှငျ တညျဆောကျထားသညျ။ ဈေး ၊ ကြောငျး ၊ ဆေးရုံ ၊ ဘဏျမြား အနီးတှငျတညျရှိသညျ။ 100% ဆောကျလုပျပွီးစီး၍ အသငျ့နနေိုငျသညျ။ A Spce Me Condo ဝယျယူသငျ့သညျ့အခကျြမြား - အဝါရောငျ MRT Sri Nut...
Plum Ramkhanheng Condominium
Plum Ramkhanheng Condominium Location Central Bangkok area near Watthana and Ramkhamheng Airport Link station Floors High Rise 33 floors (1 building) Units 1,003 units ပါဝငျသညျ့ Facilities မြား 1 Bedroom (26 Sq.m.) 1 Bedroom Plus (39 Sq.m.)2Bedroom (46 Sq.m.) Living Lounge Deck Lobby Front Garden Relax Pool Relax Garden Yoga Room Fitness Room Boxing Room Location Map
Plum 89 Condominium
Plum 89 Condominium ကို 89 Tambon Prachathipat, Amphoe Thanyaburi, Chang Wat Pathum Thani 1213 တှငျ Pruksa Real Estate Public Company Limited မှ တညျဆောကျထားသညျ။ ဘနျကောကျ နှငျ့ မွနျမာပွညျ နှဈစဉျမြားပွားလှစှာသော မွနျမာပွညျမှ ခရီးသှားဧညျ့သညျမြား သှားရောကျအလညျပတျဆုံး မွို့တဈမွို့ဖွဈပွီး ဆေးကုသသူမြား၊ ဈေးဝယျထှကျသူမြား၊...
The Astra Sky River-Phase 2
The Astra Sky River သညျ Changkang Road, Chaing Mai တှငျ North Home မှတာဝနျယူတညျဆောကျပါသညျ။ * 1.6 Acre * အခနျးပေါငျး (၅၂၀) ပါဝငျသညျ။ * Freehold property ဖွဈသညျ။ Facilities မြား Commercial Supermarkets and shops 150 meters infinity pool Coffee Shop Gym Luxury Lobby 24 hours Bont desk service 24 hours security Room Type - Studio type 29 - 34.85 sqm- 1 Bedroom 39.2 - 47.41 sqm-2Bedroom 72.41 - 73.39 sqm-3Bedroom 93.8 sqm School APIS(Pacific)International School CMIS Chiang Mai International...
Regent Rama 9
Regent Rama9သညျ Rama9Suam Luang Bangkok တှငျ Green Power မှတညျဆောကျနဆေဲ ပရောဂကျြတဈခုဖွဈသညျ။ Building Type4Buildings 8 floors 663 Units Unit type-4 type (30 sqm) Facilities မြား Lift Fitness Swimming Pool Satellite dish Cable System Security Guard 24 hours CCTV Key Card Green Area Transportation 150m Rama9Road 100m MRT Pathanakarn 250m BTS Pathanakarn Bang Na Express way (Busapha Withi Expressway) Location Map
The Tree On Nut Condo
The Tree On Nut Condo Address Sukhumvit Soi54 , Sukhumvit Road , Bangchak , Prakanonag , Bangkok အခုဝယျ ၊ အခုနထေိုငျနိုငျပါပွီ။ Freehold Land (ရာသကျပနျ ဘိုးဘှားပိုငျမွေ) ဈေးနီး ၊ ကြောငျးနီး ၊ ဆေးရုံအနီး Dining ၊ Living ၊ Kitchen ပါဝငျသညျ။ အခနျးအမြိုးအစား အိပျခနျး (၁)ခနျး - 25.75 sqm ~ 34.30 sqmအိပျခနျး (၂)ခနျး - 38.95 sqm အနီးအနားထငျရှားရှိသညျ့...
DOLCE LASALLE ကို Soi Lasalle7, Sukhumvit 105 တှငျ Sirayas Co.,Ltd မှတာဝနျယူတညျဆောကျပါသညျ။ * Condominium Concept: Luxury Private, Fully Furnished Building Types Freehold Residential Condominium 8 Stories 2272 Sqm 178 units Room types Studio-25 sqm 1 Bedroom-30-34 sqm2Bedroom-45-51 sqm 1 Bedroom Studio Room Dolce Lasalle တှငျ ပါဝငျသညျ့ Facilities မြား Lobby & Library2Elevators salted wated floor Fiber Optic System Fitness 24 hours Security Workplace Game Room Key Card Access Garden Laundry CCTV Car Parking (Estimated 69 car park...
Level Bangna ကို Soi Wat Srivaree Noi, Debaratana Road, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan Province တှငျ RATCHAPHRUEK LUXURY DEVELOPMENT မှ တာဝနျယူတညျဆောကျပါသညျ။ * 6.4 Acre * Low-Rise Building အမြိုးအစားဖွဈသညျ။ * အထပျ (၁၀) ထပျပါဝငျသော Residential Buildings (၄) လုံး တညျဆောကျထားသညျ။ * Project Completion : December 2019 (Phase 1) Room type - Type A(Twin Beds, 39-42 sqm) - Type B(Queen Size Bed, 29-34 sqm) Facilities - Lobby - Co-working Space - Rooftop Garden -...
Monte Rama9 ကှနျဒိုကို Roma9Soi 39 (Ramichamhaeng Soi 12) တှငျ Capital G-Development Co., Ltd. မှ တာဝနျယူတညျဆောကျပါသညျ။ (၈) ထပျ အမွငျ့ရှိပွီး အဆောကျအဦး (၃) လုံး တညျဆောကျထားသညျ။ ပထမ (၃) နှဈအတှငျး အငှားအာမခံဝငျငှေ ပွနျလညျ ရရှိနိုငျမညျ။(၃) နှဈနောကျပိုငျးကာလမြားတှငျ Developer နှငျ့ Profit Sharing အနဖွေငျ့ အကြိုးအမွတျ...
The Saint Residence
The Saint Residence ကို Saint John's University, 1110 Vithavadi Rangsit, Khwaeng Chom Phon, Khet C hatuchak, Krung Thep Maha Nakhon 10900 တှငျ Salan Development Co.,Ltd မှ တာဝနျယူတညျဆောကျပါသညျ။ ထိုငျးနိုငျငံသညျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ အိမျနီးခငျြးဖွဈသညျ့အပွငျ အရှိနျအဟုနျဖွငျ့ တိုးတကျလာသောကွောငျ့ နှဈစဉျခရီးးသှားနှုနျးတိုးတကျလြှကျရှိပါသညျ။ ယခု...
ထိုင်းနိုင်​ငံ၏ ကွန်​ဒိုမီနီယမ်​ အက်​ဥပ​ဒေ (ပုဒ်​မ ၁၉) အရ နိုင်​ငံခြားသားများသည်​ ထိုင်း​နိုင်​ငံရှိကွန်​ဒိုများ၏ ၄၉%အထိကို တရားဝင်​ ဝယ်​ယူပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ခွင့်​ ရှိပါသည်​။ iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း)သည်​ ထိုင်းနိုင်​ငံ ဘန်​​ကောက်​မြို့့မှ ကွန်​ဒိုများကို ​မြန်​မာနိုင်​ငံသားများ အလွယ်​တကူ ဝယ်​ယူပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​​စေရန်​အတွက် ဝန်​​ဆောင်​မှုများ ​ပေး​နေပါသည်​။
iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း) မှ ဘန်​​ကောက်​မြို့ရှိကွန်​ဒို အခန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို ရောင်းချထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း) မှတဆင့်​ ထိုင်းနိုင်​ငံ ဘန်​​ကောက်​မြို့့တွင် ကွန်​ဒိုဝယ်​ယူထားပြီး​သောသူများအား ဂုဏ်​ပြုလွှာ​ပေးအပ်​​နေပုံ
ဤ ဝနျဆောငျမှု နှငျ့ ပတျသတျ၍ စိတျဝငျစားပါက အောကျပါဖောငျတှငျ ဖွညျ့စှကျ၍ ဆကျသှယျ မေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
ဤ ဝနျဆောငျမှု အကွောငျး အသေးစိတျသိခငျြပါတယျ။ ကြေးဇူးပွု၍ ပွနျလညျဆကျသှယျပေးပါ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
၁။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှပ်နှံမလဲ။
1. ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော ကွန်ဒိုကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
2. ဘတ် ၅၀၀၀၀ - ၁၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင် စရံငွေချ ရပါသည်။
3. ဘန်ကောက်မြို့ရှိ iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းစုမှ ဝယ်ယူသူများအတွက် Kasikom Bank တွင် ထိုင်းဘဏ်အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးပါလိမ့်မည်။
4. ထိုင်းဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ဝယ်သူမှ ပေးချေရမည့် ငွေပမာဏကို လွှဲပေးရမည်ဖြစ်သည်။ နေထိုင်မှုစရိတ် (living expenses) (သို့မဟုတ်) အလည်အပတ်စရိတ် (travel expenses) ဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးပါ။
5. Developer နှင့် ဝယ်ယူမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး down payment ချပေးပါ။ down payment သည် စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ၏ ၂၅% (သို့မဟုတ်) ၃၀% ကိုပေးချေရပါမည်။
6. ဝယ်ယူထားသည့်အခန်းအား ချွတ်ယွင်းချက်ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် Developer မှ ဝယ်ယူသူထံသို့ အသိပေးပါလိမ့်မည်။
7. ချွတ်ယွင်းချက် တစုံတရာမရှိပါက ကျန်ရှိသော ငွေ ၇၅% ကို ပေးချေရမည်။
8. ထို့နောက် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းလွှဲပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူမှ ထိုင်းနိူင်​ငံ အစိုးရထံသို့ ပိုင်​ဆိုင်​မှု လွဲခ (Transfer Fee) အဖြစ်​ ၁% ​ပေးရပါမည်​။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသူများအတွက် ငွေးပေးချေမှု နည်းလမ်း (၂) မျိုးရှိပါသည်။
(၁) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် KBANK အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ - လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ -
1. Sales And Purchase Agreement (အ​ရောင်းအဝယ်​ စာချုပ်​)
2. အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှု သက်သေ (ဥပမာ-ငွေသွင်းပြေစာ)
(၂) ဝယ်ယူသူများသည် Developer ထံသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်သည်။ သို့သော် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လွှဲခွင့်မရှိပေ။ USD နှင့် USDX ($ Index)တို့ဖြင့်သာလွှဲနိုင်သည်။
၂။ ဘာကြောင့် ဘန်ကောက်မှာ အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူသင့်သလဲ။
ဘန်ကောက်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ပြီး City of Angels ဟု လူသိများသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်အပန်းဖြေရာအထင်ကရ နေရာများထဲမှ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမြန်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဗဟိုချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဘန်ကောက်မြို့လယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောက်လုပ်လျှက်ရှိသော စီမံကိန်းကြီး ၁၀ ခုကျော်ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများဖြစ်သော TCC Group, Singha Corporation and Siam Piwat စသော လုပ်ငန်းစုများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြို့ပြရှုခင်းကို ပိုမိုအသက်ဝင်စေရန် ဘတ်သန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသော စီမံကိန်းကြီးများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြသည်။
ဘန်ကောက်တွင် ကွန်ဒိုဝယ်ယူသင့်သည့် အဓိကအချက်များ
1. ဘိုးဘွားပိုင် အိမ်ခြံမြေဖြစ်ခြင်း ၊ အိမ်ယာခွန်မပေးဆောင်ရခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေခွန် မပေးဆောင်ရခြင်း၊ အိမ်ယာဖြိုဖျက်ခံရမှုမရှိခြင်း၊ မိသားစုအစဉ်အဆက် အကန့်အသတ်မရှိ အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း။
2. ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း၊ အမြတ်အစွန်းများခြင်း၊ ပုံမှန်အိမ်ငှားရမ်းခဝင်ငွေ ရရှိခြင်း။
3. အရည်အသွေးမြင့် အပြင်အဆင်ပါရှိခြင်း၊ မိမိဝယ်ယူထားသော အခန်းတည်ရှိရာ အကျယ်အဝန်း အတွက်သာဈေးနှုန်းကျသင့်ပြီး အခြား public areasများအတွက် ကုန်ကျစရိတ် မပေးဆောင်ရခြင်း။
အစားအသောက်၊ ဈေးသက်သာသောစားသောက်ဆိုင် - ၆၀.၀၀ ဘတ် (မြန်မာငွေ ၂၅၃၃ ကျပ်)
BTS Skytrain Ticket (၁ဘူတာ) - ၁၆.၀၀ ဘတ် (မြန်မာငွေ ၆၇၄ ကျပ်)
Taxi Start (ပုံမှန်ဈေးနှုန်း) - ၃၅.၀၀ ဘတ် (မြန်မာငွေ ၁၄၇၆ ကျပ်)
5. အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း၊ Down Payment သက်သာခြင်း ၊ အတိုးနှုန်းသက်သာခြင်း။
6. နိုင်ငံရေးအခြေအနေ တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု တည်မြဲမှုရှိခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်တက်လာဖွယ်ရှိခြင်း။
7. ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပန်းဖြေ အနားယူရန်အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
8. ကောင်းမွန်သော အဆောက်အအုံများ၊ ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှုများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများပေးအပ်သော ကွန်ဒိုများပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း။
9. ဝယ်ယူခွင့်ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း ၊ ချေးငွေကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း
တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသွားဧည့်သည် သန်း ၂၀ နီးပါး ဘန်ကောက်သို့ လာရောက် လည်ပတ် လျှက်ရှိသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ပြီး ASEAN ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မြို့တော်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိကကိုးကွယ်ကြပြီး “ဗုဒ္ဓသာဘာမြို့တော်” အဖြစ်လည်း လူသိများသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်
ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပြီးပြည့်စုံသော မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ရှိပါသည်။
Current Transit System
1. BTS SkyTrain Sukhumvit Line (Mo Chit – Bearing) (15 - 52baht)
2. BTS Skytrain Silom Line (National Stadium – Bang Wa) (15 - 52baht)
3. MRT Stations - Blue Line (Hua Lamphong – Tao Poon)
4. MRT Stations - Purple Line Khlong Bang Phai –Tao Poon
5. 4. Airport Rail Link – (Suvarnabhumi (Airport) – Phaya Thai)
6. BRT – Sathorn-Ratchpruek
List of Bangkok Rapid Transit System Future Lines
Dark Green Line: National Stadium – Yot – Se
Light Green Line: Yot Se -Bang Wa
Blue Line: Bangsue – Phuttamonthon4
Purple Line: Bangyai to Rat Burana
Orange Line: Taling Chan to Min Buri
Dark Red Line: from Bang Sue to Maha Chai
Light Red Line: Bang Sue to Salaya
Yellow Line: Ladprao to Samrong
Grey Line: Watcharapon to Rama9Bridge
Gold Line: Thon Buri to Wat Anongkaram
Brown Line: Khae Rai to Bueng Kum
Airport Rail Link: Phaya Thai to Suvarnabumi Airport.
မကြာသေးမီနှစ်များက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုမြင့်တက်လာပြီး တစ်နှစ်လျှင် လူပေါင်း ၂ သောင်းကျော် လာရောက် ဆေးကုသလျှက်ရှိသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ အဆင်မြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုသည် ဥရောပ ၊ အမေရိက နှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရှိ စံညွှန်းများနှင့် တန်းတူဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိသည်။
သို့သော် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားမှာမူ အဆိုပါနိုင်ငံများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကျသင့်ပါသည်။
မကြားသေးမီက ကောက်ယူထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက် သုသေသနစစ်တမ်းတစ်ခုအရ Samitivej Hospital Bangkok နှင့် Bumrungrad International Hospital တို့သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပထမဆုံးသော Joint Commission International (JCI) ထောက်ခံချက်ရရှိထားသည်ဟု သိရပါသည်။
အဆင့်မြင့် ဆေးပညာရပ်အတွေ့အကြုံများ ၊ ကောင်းမွန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းသော သူနာပြုများဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းပေါင်း ၂၅ ရာခိုင်းနှုန်းခန့်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
သင်ကြားပေးသော ဆရာအများစုသည် ဥရောပ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ဆရာများ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျောင်းသားများလာရောက်ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိသည်။
ကျူရှင်စရိတ်များသည်လည်း အခြားနိုင်ငံများထက် များစွာသက်သာပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အထောက်အပံ့များ ရရှိခြင်း။
၃။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေအခွန်
အိမ်သစ်လွှဲပြောင်းခွန် (အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်အခွန်အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံ)
Thailand - လွှဲပြောင်းခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း (ဝယ်သူမှ ၁ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ရောင်းသူမှ ၁ ရာခိုင်နှုန်း စီပေးဆောင်ရမည်။)
Australia နိုင်ငံ Victoria ပြည်နယ် - ၄င်းပြည်နယ်တွင် ဂျူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အိမ်ခြံမြေတံဆိပ်ခေါင်းကြေးသည် ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်သွားသည်။
Canada - တံဆိပ်ခေါင်းကြေး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
Singapore - နိုင်ငံခြားသားများသည် တံဆိပ်ခေါင်းကြေး ၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအတွက် ထပ်လောင်း တံဆိပ်ခေါင်းကြေး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ပုံသေ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်- ၁.၄%
အိမ်ခြံမြေအခွန်နှုန်း- ၁% မှ ၃% အထိ ; အိမ်ခြံမြေ အမွေဆက်ဆံခွန်- အများဆုံး ၅၅%။ အိမ်ခြံမြေအခွန် အမြင့်ဆုံးနှုန်းသည် Detroit ၏ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အတက်အကျပေါ် မူတည်သည်။
ကိုယ်တိုင်နေထိုင်သော အိမ်ခြံမြေခွန်- ခန့်မှန်းခြေ နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခ SGD 55,000 အောက်ရှိ အိမ်ခြံမြေခွန်သည် ၄% ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် SGD 15,000 ထပ်မံတိုးလျှင် အခွန် ၂% ထပ်မံတိုးသွားမည်။ အငှား - ပထမ SGD 30,000 တန်ဖိုးလျှင် အခွန် ၁၀% ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် SGD 15,000 ထပ်မံတိုးလျှင် အခွန် ၂% ထပ်မံတိုးသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ရောင်းချမှုအတွက် အခွန်နှုန်း
၅ နှစ်အတွင်း ပြန်လည်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လျှင် ၄.၃% နှင့် ၅ နှစ်အထက်ဆိုလျှင် ၀.၅%
ရောင်းချ၍ရသော အကျိုးအမြတ်အခွန် - ၁၈% နှင့် ၂၈%
Vancouver တွင် ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာပြည်နယ်ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ပဝယ်လက်များအတွက် အိမ်ခြံမြေလွှဲပြောင်းခွန် ၁၅% ကောက်ခံသည်။ ကနေဒါဝယ်လက်များ၏ အခွန်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၇.၉ ဆကွာခြားသည်။
ဒုတိယအကြိမ် အိမ်ရာလွှဲပြောင်းခွန်ကို အခွန်တွက်ချက်ရသည့်နှစ်အပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံသည်။ ၅ နှစ်အတွင်း အိမ်ရာပြန်လည်ရောင်းချလိုသော ပြည်ပဝယ်လက်များသည် ထပ်လောင်းတန်ဖိုး၏ ၃၀% ကို အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၅နှစ်အတွင်း ပြန်လည် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လျှင် ၃၀% နှင့် ၅ နှစ်အထက်ဆိုလျှင် ၁၅% ပေးဆောင်ရမည်။
ပြည်ပဝယ်ယူသူများအတွက် တူညီသော ဥပဒေများ နှင့် စည်းကမ်းချက်များ
ပြည်ပနိုင်ငံသားများအတွက် အိမ်ဝယ်ယူလိုပါက ကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်း အခြားအိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား ဝယ်ယူလိုပါက ဒေသခံဝယ်သူများကဲ့သို့ ဥပဒေအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အခြားနိုင်ငံများ၏ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်မှု မူဝါဒများ - Australia ၊ Europe နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် အိမ်ခြံမြေအဟောင်း ရောင်းဝယ်မှုကို ကန့်သတ်တားမြစ်ထားသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံသားများအတွက် မတူညီသော စည်းမျဉ်းများသည် အိမ်ခြံမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အိမ်ခြံမြေအဟောင်း ရောင်းဝယ်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။
အခြားနိုင်ငံတကာရှိ အခွန်မူဝါဒများ - Australia ၊ Singapore ၊ Canada နှင့် Malaysia နိုင်ငံတို့တွင် အခွန်ဝင်ငွေတိုးစေရန် နိုင်ငံခြားအိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူသူများအတွက် အခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ အထူးသတ်မှတ်ချက်များထားရှိသည်။
၄။ အာရှနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြထားသော လူနေအိမ်အခွန်နှုန်းထားများ
Philippines Not exceeding one percent (1%)
Not exceeding two percent
(2%) for city or municipality within the MMA
BND 2.20 (PhP 72.66)/sq.m. if located inside the city-center
BND 1.10 (PhP 36.33)/ sq.m. if located outside the center of the city.
Cambodia 0.1 %
Indonesia 0.1 - 0.2 %
Laos Kip5– 45 Per ha/yr
Kip5– 300 per sqm/yr
Myanmar ( Yangon Development Area ) 5%, 12%, 15% and 20% Annual Value/Gross Annual Rent
Singapore 1.0% 1o 16%
၅။ ထိုင်းအစိုးရ၏ မူဝါဒများ
နိုင်ငံခြား ပိုင်ဆိုင်မှု (အဆောက်အဦး)
နိုင်ငံခြားသားများသည် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၉၉၉ ကွန်ဒိုဥပဒေ အမှတ်စဉ် (၃)အရ အချို့အဆောက်အဦးများတွင် နိုင်ငံခြားသားများသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ပုဒ်မ ၁၉ ကွန်ဒိုမီနီယမ်အက်ဥပဒေ
နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဥပဒေပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေကို လိုက်နာရမည်။
၁။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုသည်။
၂။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
၃။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဥပဒေအရ ပုဒ်မ ၉၇ နှင့်၉၈ တို့ကို ကျွမ်းကျင်နှံစပ်သော ဥပဒေပညာရှင်များကိုသာ တရားဝင် ဥပဒေပညာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
၄။ နိုင်ငံခြားသား ဥပဒေပညာရှင်များသည် November 24, B.E. 2515 ရက်စွဲပါ National Executive Council No.281 ကြေညာချက်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးဥပဒေအရ promotion certificate ကိုင်ဆောင်ထားရမည်။
၅။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြားနိုင်ငံခြားငွေကြေးဝယ်ယူသူ (သို့မဟုတ်) ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပတွင် နေထိုင်သူ၏ ထိုင်းဘဏ်အကောင့်ထဲမှ ပိုက်ဆံထုတ်ယူသူ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအကောင့်တစ်ခုမှ ငွေကြေးထုတ်ယူထားသူများကို ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများဟုသတ်မှတ်သည်။
အရေးကြီးမူဝါဒများ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
နိုင်ငံသားကန့်သက်ချက်မရှိပေ။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဥပဒေအရ ဝင်ရောက်နိုင်သော နိုင်ငံခြားသားတိုင်း ကွန်ဒိုဝယ်ယူခွင့်ရှိပြီး အဆိုပါကွန်ဒို၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုခွဲတမ်းများအရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
နိုင်ငံရပ်ခြား ကွန်ဒိုအမွေဆက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု
ကွန်ဒိုအခန်းအမွေဆက်ခံမည့် မည့်သည့်နိုင်ငံခြားသားမဆို ကွန်ဒိုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ အရ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် သီးခြားအရည်အချင်းပြည့်မှီရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၁၉အရ အဆိုပါအမွေဆက်ခံသူသည် အမွေဆက်ခံပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အဆိုပါအခန်းကို ရောင်းချရမည်။ အဆိုပါ အမွေဆက်ခံသူသည် တစ်နှစ်အတွင်း အဆိုပါအခန်းကို စွန့်လွှတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရပ်ခြားကွန်ဒိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်သည် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုသာ ခွင့်ပြုပေးထားပြီး ၄င်း၏ဆက်ခံသူများကို ခွင့်မပြုပေးထားပေ။
ကွန်ဒို၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားချက်များမရှိပါက အဆိုပါအခန်းကို နိုင်ငံခြားသားမှ လွတ်လပ်စွာ ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားတိုင်းသည် ဝင်ငွေခွန် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ငှားရမ်းခ ဘတ် ၅၀၀၀၀ နှင့်အထက်ရရှိပါက လူမနေထိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေခွန်ကို အခွန်ကောက်ခံမှုများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည်။ (Revenue Code Section 40 Under 5)။ အိမ်ရာနှင့်မြေခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်။
1. ကွန်ဒိုတည်နေရာနှင့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း။
2. အကျယ်အဝန်း၊ အလျားနှင့် အမြင့်ဖော်ပြထားသော တိုက်ခန်းရေးဆွဲမှုပုံစံ၊ တည်နေရာ နှင့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း။
3. ဘုံပိုင် အိမ်ခြေမြေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုး။
4. တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူ၏ အမည်နှင့် မိသားစုအမည်။
5. ရယူပိုင်ခွင့်များ နှင့် ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းချက်
6. တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ထိုးမြဲလက်မှတ်
7. တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ရာထူးတံဆိပ်တုံး
Sukhumvit သည် ဘန်ကောက်မြို့၏ အဓိက မြို့လယ်စီးပွားရေး နှင့် လူနေအိမ်ရာ ရပ်ဝန်းအဖြစ် လူသိများသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘန်ကောက်မြို့၏ မြို့ပြ အဆောက်အဦးများ ၊ ကွန်ဒိုများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ညပွဲလမ်းသဘင် ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ နှင့် အဆင့်မြင့်ဟော်တယ်အများစု တည်ရှိရာနေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ BTS Skytrain “Sukhumvit” ရထားလမ်းသည် Mo Chit မှ Samrong သို့သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အဓိကနေရာများဖြစ်သော Asok, PhromPhong နှင့် Thong Lo တို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ အဆိုပါ Sukhumvit ရှိနေရာများသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အိမ်ခြံမြေဈေးများ အပြိုင်အဆိုင် ရှိကြသည်။
Silom နှင့် Sathorn သည် ဘန်ကောက်ရှိ ရှေးအကျဆုံးသော CBD များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးဘဏ်များဖြစ်သော Bank of Ayudhya ၊ Bangkok Bank နှင့် Kasikorn Bank တို့၏ ရုံးချုပ်များတည်ရှိရာ နေရာများလည်းဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် တိုက်ခန်းများ ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် လူနေထူထပ်သော နေရာလည်းဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်၏ CBD အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရှတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော “Super Tower” တည်ရှိသည်။ တရုတ်လူမျိုးအများစု နေထိုင်သည်။ Central Plaza Rama9၊ Fortune Town ၊ The Street Ratchada နှင့် Ratchada Night Train Market တို့ရှိသည်။
Chao Praya မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်တွင် တည်ရှိပြီး ဘန်ကောက်မြို့၏ အလှတရားမှာ တည်ရှိရာ မြို့ဟောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Grand Palace ၊ Wat PhraKaew ၊ Wat Pho ၊ Wat Mahathat နှင့် SanamLuanghistoric park စသည့် အံ့သြဖွယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော နေရာများဖြင့် ဝန်းရံလျှက်ရှိသည့် နယ်မြေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Chatuchak ဒေသသည် ပန်းခြံနှင့် ထင်းရှားလူကြိုက်များသော စနေ၊တနင်္ဂနွေဈေးကြောင့် လူသိများသည်။ KamphaengPhet လမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော အာရှတွင် အကြီးဆုံးဈေးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး KamphaengPhet MRT ဘူတာမှတဆင့် ရောက်နိုင်သည်။ အဆိုပါဈေးကြီးတွင် အမျိုးမျိုးသော လက်လီရောင်းချသော ပစ္စည်းများကို ဇုန်များအလိုက် ခွဲခြားထားသည်။ အဝတ်အစားများ ၊ ဖိနပ်အမျိုးမျိုး၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းကနေ ဥယျာဉ်အပင်များ နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအထိပါ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါနေရာတွင် မြောက်ပိုင်း ၊ အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း နှင့် အရှေ့မြောက်စသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဘတ်စ်ကားဂိတ်တစ်ခုလည်းရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်များနှင့် အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ပြေးဆွဲပေးနေသည်။
1. ဘန်ကောက် - ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြို့တော်
1. Wat Arun - မြစ်ကမ်းဘေးရှိ ခေါင်မိုးချွန်ချွန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော သမိုင်းဝင် ဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. Khaosan Road - လည်ပတ်သွားလာသူများ ၊ ညပွဲလမ်းသဘင်များ ၊ ဈေးဆိုင်တန်းများ ၊ဘီယာဆိုင်များဖြင့် အသက်ဝင်နေသော လမ်းဖြစ်သည်။
3. Wat PhraKaew - လျောင်းတော်မှု ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တည်ထားကိုးကွယ်ထားရာ ဗုဒ္ဓဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
4. MBK Center - ဆိုင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခင်းကျင်းထားသော ကြီးမားသည့် လက်လီအရောင်းစင်တာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
5. Safari World - ရေအလှပြပွဲများ ၊ တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းများဖြင့် စည်ကားလှသော တောမြိုင်ဥယျာဉ် တစ်ခုဖြစ်သည်။
6. Wat Pho - ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
7. Wat Saket - ရွှေရောင်တောက်ပနေပြီး အဆိုပါ စေတီတည်ရှိရာ ထိပ်မှ ဘန်ကောက်မြို့ အလှအပကို ခံစားနိုင်ခြင်းကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။
8. Lumphini Park - ရေကန် နှင့် အပျော်စီးလှေများလည်းရှိပြီး ကျယ်ပြန့်သော အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် ပန်းခြံကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်
9. Jim Thompson House - ဘန်ကောက်မြို့လယ်တွင်တည်ရှိသော ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
10. DamnoenSaduak - ဈေးပေါ်ဈေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
3. ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်များ UNIVERSITY FAMOUS IN THAILAND
Chulalongkorn တက္ကသိုလ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်အားလုံးထဲတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Mahido တက္ကသိုလ်သည် ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျန်းမာရေးသိပ္ပံအပေါ် သုတေသနပြုလုပ်သော ပြည်သူ့ သုတေသန တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။
Thammasat University (97th in Asia; 601-650 in the world)
Kasetsart University (149th in Asia; 751-800 in the world)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (joint 171st in Asia; 801-1000 in the world)
KhonKaen University (178th in Asia; 801-1000 in the world)
Prince of Songkla University (joint 188th in Asia; 801-1000 in the world)
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (261-270 in Asia)
5.AIRPORT IN THAILAND
Suvarnabhumi Airport Greater Bangkok
Don Mueang International Airport Bangkok and Nonthaburi
Chiang Mai International Airport Chiang Mai and Lamphun
Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport Chiang Rai
Hat Yai International Airport Hat Yai, Songkhla
Phuket International Airport Phuket
Samui Airport Ko Samui
Krabi International Airport Krabi
Udon Thani International Airport Udon Thani
Surat Thani Airport Surat Thani
U-Tapao International Airport Rayong / Pattaya
6. BANK SUPPORT
Kasikornbank သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဓိကဘဏ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ KBank ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့တွင် ChotiLamsam မှ မတည်ငွေ ဘတ် ၅ သောင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံ Stock Exchange တွင် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် KBANK အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။
1. Siam Paragon, Siam, Bangkok
Open : 10:00 - 22:00, Nearest BTS: Siam
2. CentralWorld, Siam
Open : 10:00-22:00, Nearest BTS: Siam, Chidlom
Open : 10:00 - 22:00, Nearest BTS: National Stadium
4. EmQuartier, PhromPhong
Open : 10:00-22:00, Nearest BTS: PhromPhong
5. Central Embassy Shopping Mall
Open : 10:00-22:00, Nearest BTS: Ploenchit
6. Terminal 21, Sukhumvit Road
Open : 10:00-22:00, Nearest BTS: Chidlom
7. Platinum Fashion Mall, Pratunam
Open : 10:00 - 22:00, Nearest BTS: Chidlom
Project Name : Plum Condo Phaholyothin 89 isacondominium project
Developer : Pruksa Real Estate,
Location : SoiPhaholyothin89 TambonPrachathipat, AmphoeThanyaburi, Chang Wat Pathum Thani 12130
Other projects of Pruksa : Chapter One, The Reserve - Kasemsan3and The Seed Phaholyothin.
Condominium completion year : 2014
Project builsing : Condominium has 20 buildings, 8 floors and 948 units in total .